Rise Archives — njem Lee - Official Site
ebili ebili ebili ebili ebili ebili ebili ebili ebili ebili ebili ebili ebili ebili
M na-ekwu okwu na onye mere agadi onye m nke ukwuu na-akwanyere ùgwù, obi ụtọ ịkọwara m game atụmatụ maka asọpụrụ Chineke m si ebi ndụ, kpọmkwem ụdị mmekọahụ m adị ọcha. M na-agbalị ijide onwe gị banyere ya, ma ọ na-esi ike jide m obi ụtọ na. Dị ka okwu leapt si ire m na ihe na-ekwekọghị n'okike ijeụkwụ, M ghọtara na ya abụghị onye dị ka obi ụtọ dị ka m bụ. He was trying to…
My akwụkwọ ọhụrụ, ebili, -abịa si January 27! Ọ ga-abụ dị n'ebe ọ bụla akwụkwọ na-ere. You can pre-order it now and visit the book website at Risebook.tv. Biko Onye-nwe ga-eji ya na-agba ume m ọgbọ na-ebili na-ebi ndụ. Ekiri ụgbọala na-adọkpụ n'elu na-agụ a obere nkọwa nke akwụkwọ n'okpuru:
A dị ike na akwụkwọ, Njem Lee rụrụ ụka na ọ bụ oge na-eteta na-ebili, na-ebi ndụ n'ụzọ na e kere anyị ibi. Ma okenye ma nwata, anyị na a na-akpọ ibi Ya. Right…
na 2012, M mara ọkwa na m ga-enwe "n'itinyekwu n'ebe music." Ee, Ama m na-ada ezumike nká-nwoke, ma m purposely mere neji okwu. M wee na-ya kpachapụrụ-edochaghị anya n'ihi na m bụ bụghị 100% sure what it would…